RAL IMERINTSIATOSIKA : Miaramila 50 mirahalahy naseho teo ambany faneva
Miseho amin’ny endriny maro samihafa ny trangana tsy fandriampahalemanana amin’izao fotoana izao, na izany an-tanàn-dehibe na ambanivohitra. 13 mars 2018
Azo heverina ho isany mahatonga izany ny tsy fahampiana isa ny tompon’andraikitra eny anivon’ny fitandroana ny filaminana, isan’izany ny Tafika malagasy. Ity farany izay tena mbola vitsy mihitsy raha mitaha amin’ny fitombon’ny mponina ankehitriny. Tena ilaina araka izany ny fanatevenana ny Tafika malagasy mba hahafahan’ny vahoaka malagasy misitraka tany milamina sy mandry fahalemana.
Ho fanatratrarana izany paikady izany, indrindra any amin’ireo faritra mena, dia natao indroa miantoana ny fanomezana fanofanana fototra ara-miaramila ireo tanora zazalahy tamin’iny 2017 iny.
Hetsika izay natao nanerana ireo faritany miaramila enina eto Madagasikara. Ho an’ny Rezimanta tafondro mavesatra Imerintsiatosika manokana izao dia ny herinandro lasa teo no namoaka teo ambany faneva ireo 50 mirahalahy, vao nahavita ny fiofanana ara-miaramila fototra nandritra ny telo volana. Izy ireo izay efa mpiofana andiany faharoa, raha efa tamin’ny taon-dasa ireo andiany voalohany no nahavita ny fiofanany.
Ny kolonely Trangavelo, lehiben’ny rezimanta tafondro mavesatra, no nitarika ny lanonana. Ny lefitra faharoan’ny lehiben’ny etamazaoro jeneralin’ny tafika malagasy, Jeneraly Rakotonirina Théophile, niaraka tamin’ireo lehiben’ny vondron-tafika samihafa eto Antananarivo no tonga nanome voninahitra ny fotoana.